UMontana uzophikisa iziphumo zikaMadonsela | News24
UMontana uzophikisa iziphumo zikaMadonsela
Johannesburg – Lowo owayeyisikhulu esiphezulu sePassenger Rail Agency of SA (Prasa) uLucky Montana uzobabela enkantolo ngenhloso yokuphikisana neziphumo zombiko kaMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela mayelana nokuthi uyathinteka ekungahanjisweni kahle kwezinto kwiPrasa.
UMontana, ekhuluma ngoLwesibili kwiTalk Radio 702, uthe: "UMvikeli woMphakathi akayena umahluleli, ngakho ngizoliyisa enkantolo yomthetho lolu daba, ukuze inkantolo ilubhekisise bese luthathwa njengolungekho."
Funda nalolu daba: Kushone 10 kuqhuma ithangi le-gas
Uthe konke okuthiwa ukwenzile uzofuna kubhekisiswe ngoba ukholelwa ukuthi akulona iqiniso.
UMontana uthe: "Ngicabanga ukuthi zonke izinsolo, zonke iziphumo zikaMvikeli woMphakathi, okubalwa kuzona nezinto athi ngithinteka ngqo kuzona, angizamukeli.”
NgoMsombuluko, uMadonsela uthe kuzomele uMontana aqondiswe izigwegswe yiPrasa ngokungaphathi ngendlela efanele.